Saraakiil Ka Tirsan Nabadsugida Oo Isku Dilay Degmada Cadale. – Calamada.com
Saraakiil Ka Tirsan Nabadsugida Oo Isku Dilay Degmada Cadale.
Wararka ka imaanaya degmada Cadale ee gobalka Shabeelada dhexe ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay degmadaasi isku dileen saraakiil ka tirsan qeybta nabadsugida ee maamulka dowlada ridada ugu magacaaban degmadaasi.
Kadib muran xoogan oo soo kala dhexgalay saraakiisha sarsare ee maleeshiyaatka Ashahaado la dirirka ee degmada Cadale ayaa waxa uu murankaasi sababay in taliyaha nabadsugida degmadaasi toogasho uu ku dila taliye ku xigeenkiisa oo lagu magacaabi jiray Ibraahim Maxamuud Waambe.
Sidoo kale maleeshiyaat ka tirsan BS-ta degmada Cadale oo ku beel ah taliye ku xigeenka la dilay ayaa iyagana isla goobta ku toogtay taliyihii nabadsugida Cadale ee dilka bilaabay kaasi oo isagana lagu magacaabi jiray Mahad Shaaweeye.
Si rasmi ah looma oga waxa uu salka ku hayay muranka soo kala dhex galay labada sarkaal ee ugu sareysay maleeshiyaatka Ashahaado la dirirka degmada Cadalle’iyadoona wali degmada ay ka taagantahay xiisad u dhaxeysa maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka.
Previous: Xasan Al-turaabi Oo Ku Geeriyooday Magaalada Khartuum.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 26-05-1437 Hijri.